ဖေဖေကိုကျွန်တော်အရမ်းကြောက်ပါတယ်။ ဖေဖေ့မျက်နှာညိုနေရင် ကျွန်တော်တို့ညီအကိုသုံးယောက် နေစရာနေရာမရှိသလို လုပ်စရာအလုပ်လဲနည်းပါးသွားတတ်ပါတယ် ။ဖေဖေဟာလူဆိုးကြီးတော့မဟုတ်ပါ ။ ကျွန်တော်တို့ညီကိုယ်တွေ ဘောလုံးကန်ရင် သူကဂိုးသမားပါ။ စက်ဘီးထွက်စီးရင်လဲ သူလိုက်စီးပါတယ် ။ ပြေးရင်လဲဖေဖေက စတီးခရာတခုနဲ့ ကပ္ပတိန်လုပ်ပါတယ်။ အားကစားမျိုးစုံကို သူတယောက်ထဲ ဒိုင်လူကြီးလုပ်ပါတယ်။ ဇာတ်ကားကြည့်လဲ သူဦးဆောင်ပါတယ်။ စာအုပ်အ
ကြောင်းဆိုလဲသူနဲ့မကင်းပါဘူး ။သန့်ရှင်းရေးလဲသူအမြဲတမ်းနီးပါးလောက်ဝင်လုပ်ဆောင်တတ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ညီကိုယ်သုံးယောက်အတွက် ဖေဖေဟာ ပဲခူးဆားပမာတော်တော်လေးခရီးပေါက်မြောက်ပါတယ် ။ အကြံညာဏ်ပေးလဲဖေဖေဟာ
၀ါသနာထုံပါတယ်။ အလုပ်အကိုင်ကိုက ကုမ္မဏီတခုရဲ့အကြံပေးအရာရှိပါ ။ ကောင်မလေးတွေအကြောင်းတိုင်ပင်ရင် မင်းမေမေနဲ့တုန်းကပေါ့လို့ အစချည်ပြီးပြောတတ်သလို ဟိုကောင်မလေးကို ဇေကြိုက်လို့စာပေးမလို့ဖေဖေ လို့ပြောလိုက်ရင်
တော့ ဒို့တုန်းကသူများသွားရေးခိုင်းရတာဗျ ဇေမင်းကံကောင်းတယ် ဖေဖေကြည့်ပေးမယ်လို့ပြောပြီး တဟားဟားနဲ့အခြောက်တိုက်ရီနေတတ်ပါတယ် ။တယောထိုးရင်လဲသူနဲ့မလွတ်သလို ပီယာနိုခေါက်နေရင်လဲ သူက၀င်သီချင်းဆိုခြင်း လက်ခုပ်အလကားတီးပေးခြင်းစသော အားပေးရာအားပေးကြောင်းကိစ္စအ၀၀ကို ကိုယ့်စရိတ်ကိုယ်စားပြီးတာဝန်ကျေထမ်းဆောင်လေ့ရှိပါတယ်။ အဲလောက်ချစ်စရာကောင်းလှပြီး လူဆိုးမဟုတ်ပါသော ဇေဖခင်ကြီးကိုကြောက်ရခြင်းမှာ ဒီလိုပါ….
ဟိုနှစ်ကောင်လာခဲ့အုံးလို့အကြီးကောင်ကြီးက သံပြတ်နဲ့ခေါ်ပါတယ် ။ ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကထူးတယ်ဟေ့ဆိုပြီး သူ့အခန်းထဲကိုသွားပါတယ်။ ဘာတုန်း ရူးတိုးတိုး ငါဒီနေ့ သူငယ်ချင်းကပြောတယ် အေးရှားပလာဇာ အောက်ထပ်မှာ night club ရှိသတဲ့ အဲဒါမင်းတို့သိလား.. သိဘူး အေး အဲဒါသွားမလို့လိုက်မလား အာလိုက်မှာပေါ့ လိုက်ရင်ငါပြောတဲ့အတိုင်းလုပ် ကြားလား…။ ဟုတ်ကဲ့ဆရာ… ကျွန်တော်တို့ညီအကိုတွေ တီးတိုးတိုင်ပင်ပြီး ဝေး…လို့အော်လိုက်ပါတယ် ။ကိုယ့်အတွေး
နဲကိုယ်မအိပ်ကြပါဘူး။ ဖေဖေဟာ ညကိုးနာရီထိုးရင် သူ့အခန်းထဲကို မေမေပါတပါးတည်းခေါ်ဆောင်ပြီး မိုးမလင်းမချင်းပြန်ထွက်မလာတတ်တော့ပါ။ ကျွန်တော်တို့ညီအကိုကိုယ့်တာဝန်နဲ့ကိုယ်ခွဲဝေထားတဲ့အတိုင်း ကျွန်တော်ကဖေဖေ့အခန်းကို မီးမှိတ်မမှိတ်သွားချောင်းပါတယ်။ မှိတ်ပြီဆိုပြီး အချက်ပြလိုက်တော့ ဟိုနှစ်ကောင်ဆင်းလာပြီး အလတ်ကောင်က သော့သွားခိုးပါတယ် ။ကျွန်တော်က ခြံသော့ယူပြီး တံခါးကိုသာသာလေးဖွင့်ပါတယ်။ အကြီးကောင်ကကားဂိုထောင်ကိုသွား
ပါတယ်။ ကျွန်တော်လဲတံခါးဖွင့်ပြီးရော ဟိုနှစ်ကောင်ကားကိုတွန်းထုတ်လာပါတယ် ။ ပြီးတော့ကျွန်တော်ကခြံတံခါးကို ပြန်ပိတ်ပါတယ်။ ကျွန်တော့်တသက်မှာ ညီအကိုသုံးယောက်ဒီတခါလောက်ညီညွတ်တာတခါမှမကြုံခဲ့ဘူးပါ… အကြီးကောင်က
ခြံနဲ့ခတ်ဝေးဝေးမှာ စက်နှိုးပြီးစောင့်နေပါတယ။် အလတ်ကောင်ကကျွန်တော့ကိုလာကြိုပါတယ် တက်..တက်..သွားမယ်ဟုဆိုခါကားလေးမောင်းထွက်သွားသောအရသာမှာဒီတသက်စီးဘူးသောကားတကာကားတို့ထဲတွင် မည်သည့်ကားနဲ့မျှမတူပါ ။ထို့နောက် ကလပ်မှာ အကြီးကောင်က ၀ိုင်တပုလင်းတိုက်ပါတယ်။
သူကတော့ဘာတွေသောက်လဲမသိဘူး။ ကပါတယ်.. အကြီးကောင်ကဆော်တပွေနဲ့စကားပြောပါတယ်။ ညတချက်ထိုးလောက်မှာ ပျော်ရွှင်စွာညီအကိုသုံးယောက် ပြည်တော်ပြန်ခရီးစတင်ပါတယ။် အဲဒီညမှာ ကျွန်တော်တို့ညီကိုယ်သုံးယောက်တယောက်ကိုတယောက် ကြည်ညိုခြင်းလေးစားခြင်း၊ အချင်းချင်းတိုင်ပင်ညီညွတ်ကြခြင်း၊ကတောက်ကစမများခြင်း၊တယောက်ကိုတယောက်ပက်ပက်စက်စက်ထောက်ခံကြခြင်း ၊ မိမိယူထားသောတာဝန်များကိုအသီးသီး မခိုမကပ်တပြေးညီလုပ်ဆောင်ကြလျှက် ညီညွတ်ရေးမင်္ဂလာကို သရုပ်သကန်ပေါ်လွင်သည့်တိုင်ကြီးစွာသောညီညွတ်ခြင်းကို ညီညွတ်လျှက် အကြီးကောင်ကြီးကုတင်ပေါ်တွင် တခေါခေါနှင့် သုံးယောက်ညီညီညွတ်ညွတ်အိပ်ကြပါတယ်။
နောက်နှစ်ရက်ကြာသောအခါ........ကောင်လေးတွေထမင်းစားမယ်ဟေ့။ စောလိုက်တာ..။ မစောဘူးဟဲ့ ဂျီးမများနဲ့ မြန်မြန်လာခဲ့ကြ ဇေမင်းဖေဖေကိုသွားခေါ် လှည့် ပါးထမင်းမယ်............အေးမစားဘူး မင်းအမေကိုပြောလိုက် ထမင်းမစားတော့ဘူးလို့ အာ..ဘာလို့လဲ တူတူစားမဲ့ဟာ ကို "တောက်"ကျွန်တော်တော်တော်ထိန့်လန့်သွားပါတယ် ။ ညစာပါစားချင်စိတ်ပျောက်သွားပါတယ် ။ ဖေဖေတခါမှတောက်မခေါက်ဘူးပါ။ သွားတော့ဇေမင်းမေမေကိုပြောလိုက် ပါးမစားတော့ဘူးလို့ (ဟုတ်)..။အဲဒီတခွန်းနဲ့ဘဲ ကျွန်တော်အောက်ထပ်ကိုပြေးဆင်းလာပါတယ်..။ မေမေဖေဖေတောက်ခေါက်တယ်။ ထမင်းလဲ မစားဘူးတဲ့ မေမေတို့ရန်ဖြစ်ထားလား ။ အကြီးကောင်က ဟိုခွေးမသားလေးအသာနေတာမဟုတ်ဘူး လူကြီးကိစ္စတွေဝင်မပါနဲ့ အလတ်ကောင်ကလဲ ဟုတ်ပ..မင်းအဲကြောင့်မို့ သောက်သုံးမကျတာ..။ ကဲတော်ကြတော့စား မေမေလဲမသိဘူး မနက်ကလဲထမင်းသိပ်ပြီးမစားဘူး။ နေပါအုံးမေမေသွားမေးအုံးပါမယ် ။ ဖေကြီးဖေကြီးရှင်ထမင်းဘာလို့မစားတာလဲ။ အဲအသံနောက်ဘာသံမှမကြားရတော့ပါ … မေမေခေါင်းငိုက်စိုက်ဆင်းလာပါတယ်..။ ကဲမင်းတို့စားတော့မေမေနောက်မှစားမယ်..။ အာဗျာ သုံးယောက်သားသံပြိုင်ထွက်သွားပါတယ်..။ အကြီးကောင်မစားတော့ဘဲထသွားပါတယ်..။ အလတ်ကောင်က အကြီးကောင်ပုဂံထဲကဟင်းကိုပါသူဆယ်ယူစားပါတယ်..။ ကျွန်တော်ကတော့ဗိုက်ဝသည့်အထိစားလိုက်ပါတယ်..။ ထို့နေ့ညတအိပ်လုံးတိတ်ဆိတ်နေပါသည်။ ခါတိုင်းဒီအချိန်ဆိုရင် အသံမျိုးစုံထွက်နေသောကျွန်တော်တို့အိမ်ဟာ တအားတိက်ဆိတ်လွန်းအားကြီးလို့ အိမ်မြောင်များကပင် ၀မ်းမြောက်ဝမ်းသာ သာဓုအနုမောဒနာပြုသည့်အလားတစုတ်စုတ်နဲ့သာစုတ်ထိုးနေပါတော့တယ်..။ ဟေ့ကောင်ဖေဖေဆင်းလာတယ်အကြီးကောင်ကပြောပါတယ်..။
သားတို့လာအုံး ဖေဖေမင်းတို့ကိုပြောစရာရှိတယ် ။
မင်းတို့ကို ဖေဖေဆုံးမခဲ့တယ်နော်..ဟုတ်လား ?
ဟုတ်ကဲ့ (သံပြိုင် )..
မညာနဲ့မလိမ်နဲ့ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြော လို့ဖေဖေဆုံးမဘူးခဲ့တယ်မလား …။
ဒါဆိုသားတို့ကိုဖေဖေမေးမယ် မင်းတို့ဖေဖေမသိဘဲဘာလုပ်ခဲ့လဲ ?
အိုကေ အလတ်ကောင် ပါးမျက်နှာကိုကြည့်ပြောစမ်း မင်းဘာလုပ်ထားလဲ
အိုကေ ဇေပါးကိုကြည့်စမ်း မင်းဘာတွေလုပ်ထားလဲ
အိုကေ ဒါဆိုပါးပြောမယ် ပါးသိပ်ဝမ်းနည်းတယ် မင်းတို့ကို ဖေဖေဟာ သူငယ်ချင်းလိုသဘော
ထားပြီးအရာရာကိုအလိုလိုက်ထားခဲ့တယ် ။ ဖေဖေ့မျက်ဝန်းတွေဟာ ရီဝေပြီးအဝေးကိုငေးကြည့်နေပါတယ်။ အသံဟာထွက်ဘို့မနဲကြိုးစားပြောနေရတဲ့အသံမျိုးပါ ။
အမြဲတမ်းဂုဏ်ယူမိတယ် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအထင်လဲကြီးမိတယ် ။ ငါ့သားတွေကိုငါဘက်ပါအောင်ငါစည်းရုံးနိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့..မနက်ကကိုအေးမင်းစီက ဖုန်းဆက်လာတယ် ။ မင်းတို့ညီကိုယ်သုံးယောက်ကို အာရှပလာဇာမှာ ည၁၀နာရီလောက်တွေ့ခဲ့တယ်တဲ့
မင်းတို့ဖေဖေကိုညာတယ်..။ မင်းတို့ကိုမညာဘို့ဆုံးမခဲ့ပေမဲ့ ဖေဖေတာဝန်မကျေဘူး ။ ဒါကြောင့်ဖေဖေ့ကိုယ်ဖေဖေဒဏ်ခတ်မယ် ။ ဒီနေ့ကစပြီးဖေဖေထမင်းမစားဘူး။
မေကြီးမင်းတခွန်းမှဝင်မပြောနဲ့ဟုဖေဖေကမားကိုလှမ်းပြောပါတယ်။ မားထံကတစုံတရာတုန့်ပြန်သံမကြားပါ ။ ငါ့ဘက်ကဘာတွေဝတ္တရားမကျေသလဲ ဘာတွေလိုအပ်နေသလဲပြောကြပါ ။ဟားဟား..နဲ့ဖေဖေဟာ မျက်ရည်တွေကျပြီး ရီပါတယ်။ ဒီအသံဒီမြင်ကွင်း ဒီစကားလုံးများနဲ့ကျွန်တော်တို့
ညီအကိုတွေတော်တော်စိမ်းခဲ့ပါတယ် ။တခါမှမမြင်ဘူးမကြားဘူးခဲ့ပါ ။ အဲအချိန်မှာ အကြီးကောင်က အလတ်ကောင်ကို လက်တို့ပါတယ် ။အလတ်ကောင်က ကျွန်တော့ကိုလက်တို့ပါတယ်။ ညီအကိုသုံးယောက်တပြိုင်နက်ထပြီး ဖေဖေ ခြေသလုံးတွေကိုင်လိုက်ပြီး ပါးစပ်ကသားတို့မှားပါတယ်ဖေဖေလို့ တညီတညွတ်ထဲ တိုင်ပင်ထားသလို ပြိုင်တူထွက်သွားပါတယ။် ဒါပေမဲ့ဖေဖေဟာ လုံးဝမကြည့်ဘဲ အတင်းရုံးပြီး အပေါ်ကိုထပ်ကို ပျင်းရိလေးကန်စွာနဲ့ တတ်သွားပါတယ် ။....ဒီမြင်ကွင်းဟာပြီးဆုံးသွားပေ
Posted by နှင်းမိုး at 4:00:00 pm
ဒါဆို သူတို့အပါး ထမင်းမစားရတော့ဘူးပေါ့
a yual nae ma like ag soe tar koo zay ga.zayako tway ga lae zay nae nyiako lo ma pyaw ya bu,1 pon san hte par lar...:P
ku yaw lain mar p lar?
သားသုံးယောက် ဖခင်ရဲ့ ပဲ့ကိုင်မှုက အတုယူစရာကောင်းတဲ့ ဇာတ်လမ်းလေးဗျာ။
သားတွေမွေးထားတော့ အဖေရဲ့ ပြတ်သားမှုက အတုယူစရာပဲဗျာ။
9 May 2010 at 23:59
သားဆိုးနှစ်ယောက်ရဲ့ အဖေ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ အဖေ့ကို တွေးရင်း...
ဘာသာပြန်တပုဒ်ဖတ်ဘူးတယ် သားကို မလိမ်တတ်အောင် သားလာခေါ်တဲ့ကားနဲ့ မလိုက်ဘဲ အလုပ်ကနေ အိမ်ထိအောင် ခြေလျင်ပြန်တဲ့ ဇာတ်လမ်းလေး။
စာတွေ alignment ပြန်စီရင်ကောင်းမယ်။
စကားပြောတွေ ကော်မာ အဖွင့်အပိတ်လေးနဲ့ပြရင် ပိုကောင်းမယ်။
10 May 2010 at 07:58
ဇာတ်လမ်းထဲမှာ ဇေ နောင်တရသလို လက်တွေ့ဘ၀မှာလဲ ...........
အခုရော ပါးကို ညာနေသေးလားလို့
သြေ် သားဆိုးအဖေ တပေပေ ပဲ..။
သနားစရာ ဖေဖေကြီး ခမျာ ကြေကွဲ နေရပါ့..။
ပျော်ရွင်ပါစေ.. အဖေကို ချစ်တဲ့သူများ ဖြစ်နိုင်ပါစေလို့ .. ဇတ်ကောင်လေးတွေ အတွက်ဆုတောင်းရင်း..
zay,u are good writer!